अन्तिम चरणमा पुगेको कोरोनाको खोप रोकियो, अब के हुन्छ ? – ekarnalikhabar
अन्तिम चरणमा पुगेको कोरोनाको खोप रोकियो, अब के हुन्छ ?
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०२:४२
लण्डन । बेलायतमा अन्तिम चरणमा पुगेको कोभिड १९ विरुद्धको खोप विकासको प्रक्रिया अचानक रोकिएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ ।
बीबीसीका अनुसार परीक्षणमा सहभागी एकजना बिरामी परेपछि अन्तिम चरणमा पुगेको खोपको क्लिनिकल परीक्षण अहिलेका लागि रोकिएको हो। तर सहभागी ती व्यक्तिमा परीक्षणको प्रतिकुल असर देखिनुको कारण औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले अझै थाहा नभएको जनाएको छ । जुन कम्पनीले खोप विकासमा अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीसँग
साझेदारी गरिरहेको छ ।
यसरी खोप विकासको काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिनुलाई निराशाजनक अवस्था भनिएको छ । छिट्टै सफलता हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको यही काम नै रोकिँदा अन्योल सिर्जना हुनुका साथै निराशाजनक भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
रिपोर्ट अनुसार बिरामी परेका ती व्यक्तिलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । बीबीसीका मेडिकल सम्पादक फेर्गुस वाल्शले यस प्रक्रियाका लागि थप केही दिन लाग्‍नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार खोप परीक्षणको प्रक्रिया स्थगित पहिला पनि सुनिएको थियो ।
स्वयंसेवीलाई सञ्चो नभएर अस्पताल भर्ना भएको खण्डमा उनको स्वास्थ्य समस्याको कारण स्पष्ट नहुन्जेल अध्ययनलाई रोकिने उनले बताए । अक्सफोर्डका प्रवक्ताले भने यस्तो ठूलो परीक्षणमा कुनै कारणले बिमारी देखिएको अवस्थामा यसबारे राम्ररी जाँच्‍न स्वतन्त्र समीक्षा गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर यस्तो समस्या देखिएर अध्ययन रोकिएको यो पहिलो पटक नभएको बीबीसीमा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख छ । गत एप्रिलमा सहभागीहरूलाई कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्ने क्षमता विकास गर्न पहिलो पटक खोप दिइएपछि सहभागीमा समस्या देखिएको यो दोस्रो अवसर भएको रिपोर्टमा छ ।
यस्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले बजारमा जाने खोप सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित होस् भन्ने प्रत्याभूत गर्न परीक्षण रोक्ने निर्णयमा पुगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वभर झन्डै १८० वटा खोप परीक्षण भइरहेको तर तीमध्ये कुनैले पनि क्लिनिकल परीक्षण पूरा नगरेको जनाएको छ।
विज्ञहरुले एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाइरहेको खोपलाई नै हालसम्म प्रगति भएको कामको रुपमा हेरेका छन् । जुन तेस्रो चरणमा थियो । तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि अमेरिका, यूके, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकाका करिब ३०,००० मानिसहरूको पनि परीक्षण सहित सबै परीक्षण अहिलेका लागि रोकिएको छ ।
यसवाहेक रुसले बनाएको खोपबारे केही वैज्ञानिकहरूले अविश्वास व्यक्त गर्दै अध्ययनका केही परिणामलाई चुनौती दिएका छन्। त्यसबारे थप समीक्षा गर्नुपर्ने विज्ञहरको जिकिर रहँदैआएको छ ।